Ukukhuthazwa kuka-Obama Ingxoxo yeDemokhrasi yeNgqungquthela
Imiba Amanani abalulekileyo kunye neMicimbi
NgoJulayi 27, 2004, uBarack Obama , owayengummangali ovela e-Illinois , wanikela intetho echanezelayo kwiNgqungquthela yesizwe ye-Democratic Republic ka-2004.
Njengomphumo wenkulumo ekhoyo ngoku (echazwe ngezantsi), u-Obama wavuka kwisizwe esivelele, kwaye intetho yakhe ithathwa njengenye yeengxelo zezopolitiko zekhulu lama-21.
KUNYE KUNYE, NGOKUNYE nguBarack Obama
INational National Convention eBoston, iMisa.
Julayi 27, 2004
Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu...
Ngenxa yombuso omkhulu wase-Illinois, imizila yelizwe, umhlaba weLincoln, ndivumele ukubonisa ukubonga kwam kunene ilungelo lokujongana nale ndibano.
Ukubulela kwiLifa leMveli
Ngobusuku luzuko olukhethekileyo kum ngenxa yokuba-makhe sijamelane nayo - ubukho bam kulesi sigaba buyinto engenakwenzeka. Ubaba wayengumfundi wasemzini, wazalelwa waza wakhulela kwidolophana encinane eKenya. Wakhula iifomo zeebhokhwe, waya esikolweni kwintsimbi ephahleni. Uyise-utatomkhulu-wayengumpheki, umkhonzi wasekhaya waseBrithani.
Kodwa utata wam wayenamaphupha amakhulu kumntwana wakhe. Ngomsebenzi onzima nokunyamezela ubaba wathatha isifundo sokufunda kwisimo semilingo, iMelika, esakhanyisa njengekhontsi yenkululeko kunye nethuba kwabaninzi ababeza ngaphambili.
Ngoxa ndandifunda apha, utata wadibana nomama. Wazalelwa edolophini ngaphesheya kwehlabathi, eKansas.
Uyise wakhe wasebenza kwii-oil rigs kunye neefama ngokubanzi kwezoxinzelelo. Ngomhla emva kwePearl Harbour umkhulu wam osayinela emsebenzini; wajoyina umkhosi kaPatton, waya eYurophu.
Buyela ekhaya, ugogo wamkhulela umntwana waza waya kusebenza kumgca wendibano yebhomu. Emva kwemfazwe, bafunda kwi-Bill GI, bathenga indlu nge-FHA
, kwaye kamva wathuthela entshonalanga yonke indlela eya eHawaii efuna ithuba.
Kwaye nabo babe nephupha elikhulu kwintombi yabo. Iphupha elifanayo, elizalwe kumazwekazi amabini.
Abazali bam ababelangalelanga nje uthando olungenakwenzeka, babelana nokholo oluhlalayo kwiimeko ezi zizwe. Baye banginika igama le-Afrika, uBarack, okanye "basikelelwe," bakholelwa ukuba kwiMelika igama lakho aliyithintelo kwimpumelelo.
Baye bacinga ukuba ndiya ezikolweni ezilungileyo kunazo zonke ezweni, nangona bengenotyebi, kuba kwiMerika evulekile akudingeki ukuba ube nobutyebi ukufezekisa ukuba unako.
Bobabili badlula ngoku. Kodwa ke, ndiyazi ukuba, kulobu busuku, bajonga phantsi kwam ngekratshi elikhulu.
Ndimi apha namhlanje, ndinombulelo ngokuhlukahluka kwelifa lam, ndiyazi ukuba amaphupha abazali bam bahlala kwiintombi zam ezixabisekileyo. Ndimi apha ndiyazi ukuba ibali lam liyingxenye yebali elikhulu laseMelika, ukuba ndiba netyala kubo bonke abo beza phambi kwam, kwaye ukuba, nakwezinye ihlabathi emhlabeni, ibali lam kunokwenzeka.
Ngobusuku, sihlanganisene ukuqinisekisa ubukhulu besizwe sethu - kungekhona ngenxa yobude bezakhiwo zethu, okanye amandla empi yethu, okanye ubukhulu boqoqosho lwethu.
Ikratshi lethu lisekelwe kwisiseko esilula, sichazwe kwisibhengezo esenziwe ngaphezu kweminyaka engamakhulu amabini edlulileyo: "Sibona ukuba ezi zinto zibonakalisa ukuba bonke abantu badalwe ngokulinganayo. Amalungelo abo. Phakathi kwezi zinto kubomi, inkululeko kunye nokuphangela ulonwabo. "
Leyo yinyaniso yemveli yaseMerika-ukholo kwiiphupho ezilula, ukubambelela kwimimangaliso encinci:
- Ukuze sikwazi ukukhupha abantwana bethu ebusuku kwaye siyazi ukuba bayondliwa kwaye banxibe kwaye bakhuselekile kwingozi.
- Ukuze sitsho into esiyicingayo, bhala into esiyicingayo, ngaphandle kokuva ngokukhawuleza emnyango.
- Ukuze sibe nombono kwaye siqalise ishishini lethu ngaphandle kokuhlawula isimbofu.
- Ukuba sinokuthatha inxaxheba kwinkqubo yezopolitiko ngaphandle kokwesaba ukubuyisela, kwaye ukuba izavo zethu ziya kubalwa ubuncinci, ixesha elininzi.
Kulo nyaka, kulonyulo, simenywa ukuba siqinise iixabiso zethu kunye nokuzibophezela kwethu, ukubambelela kwizinto eziyinyaniso kwaye sibone indlela esilinganisa ngayo, kwilifa labathengi bethu kunye nesithembiso sezizukulwana ezizayo.
Nabanye baseMelika, iiDemokhrasi, iRiphabhliki, abazimeleyo- ndithi kuwe ebusuku: sinomsebenzi omningi wokukwenza.
- Umsebenzi omningi owenzela abasebenzi abadibana nabo eGalesburg, i-Ill., Abalahlekelwa yimisebenzi yabo yomanyano kwisityalo seMaytag esithuthela eMexico, kwaye ngoku bafanele baqhubisane nabantwana babo ngemisebenzi ehlawula iifiksi ezi-7 ngeyure.
- Enye into endiyifumene nayo ukuba ndidibana nomntu owayelahlekelwa ngumsebenzi wakhe kwaye abuyele iinyembezi, azibuza ukuba uza kuhlawula njani i-$ 4,500 ngenyanga ngenyanga yeemfuno zakhe zonyango ngaphandle kweempilo ezibalelwa kuzo.
- Okunye okumele kwenziwe kumfazi oselula e-East St. Louis, kunye namanye amawaka afana naye, onamabakala, unokuqhuba, unokuthanda, kodwa akanayo imali yokuya kwiikholeji.
Ngoku ungangifumani. Abantu abadibana nabo - kwiidolophana ezincinci kunye nezixeko ezinkulu, kwiindawo zokutya kunye neepaki zeeofisi - abazilindele ukuba urhulumente azinyulule zonke iingxaki zabo. Bayazi ukuba kufuneka basebenze nzima ukuze bafike phambili-kwaye bafuna.
Yiya kwiinqununu zeekolishi ezikujikeleza i-Chicago, kwaye abantu baya kukuxelela ukuba abafuni ukuba imali yabo yentela ichithe, yinkampani yenhlalakahle okanye iPentagon.
Yiya kunoma yiphina indawo yangaphakathi yedolophu, kwaye abantu baya kukuxelela ukuba urhulumente wedwa akakwazi ukufundisa abantwana bethu ukuba bafunde - bayazi ukuba abazali kufuneka bafundise, ukuba abantwana abakwazi ukufezekisa ngaphandle kokuba siphumelele ukulindela kunye nokucima iiseti ukuphelisa ukunyundela okuthi ulutsha olumnyama olunencwadi lusebenza emhlophe. Bayazi ezo zinto.
Abantu abalindele ukuba urhulumente azisombulule zonke iingxaki zabo. Kodwa bayaziqonda, ezinzulu emathanjeni abo, ukuba ngokutshintsha nje okubalulekileyo kwizinto eziphambili, sinokuqiniseka ukuba wonke umntwana waseMelika unotshongo olufanelekileyo ebomini, kwaye ukuba iingcango zithuba zihlala zivulekile kubo bonke.
Bayazi ukuba singenza ngcono. Kwaye bafuna ukhetho.
Kulo lonyulo, sinika olo khetho. IQembu lethu likhethe umntu ukuba asikhokele kuthi ngubani owenza okulungileyo kakhulu eli lizwe elifunekayo. Yaye loo mntu nguJohn Kerry . UJohn Kerry uqonda iingcinga zoluntu, ukholo, kunye nenkonzo kuba baye bachaze ubomi bakhe.
Ukususela kwi-heroic inkonzo yakhe eVietnam, kwiminyaka yakhe njengomtshutshisi kunye nomlawuli we-lieutenant, iminyaka engamashumi amabini kwi-Senate yase-United States, uye wazinikezela kweli lizwe. Ngokuphindaphindiweyo, simbone ebona ukhetho olunzima xa zilula.
Ixabiso lakhe - kunye nerekodi yakhe - ukuqinisekisile okulungileyo kithi. UJohn Kerry ukholelwa eMelika apho umsebenzi onzima uvuzwa khona; ngoko endaweni yokunikezela ikhefu kwiinkampani zokuthunyelwa kwamanye amazwe, uyazinikeza iinkampani ezidala imisebenzi apha ekhaya.
UJohn Kerry ukholelwa eMelika apho bonke abemi baseMelika banako ukufumana inkxaso efanayo yempilo yethu kwezopolitiko eWashington.
UJohn Kerry ukholelwa ekuzimeleleni kwamandla, ngoko asibanjwanga inzuzo kwiinkampani zeoli, okanye i-sabotage yamasimi angamazwe angaphandle.
UJohn Kerry ukholelwa kwiinkululeko zomgaqo-siseko ezenze ilizwe lethu libe nomona wehlabathi, kwaye akayi kubakhokela inkululeko yethu eyinqobo, okanye asebenzise ukholo njengenxalenye yokwahlula.
Kwaye uJohn Kerry ukholelwa ukuba kwimfazwe yehlabathi eliyingozi kufuneka kube ngenye indlela, kodwa akufanele ibe yinto yokuqala.
Uyazi, ixeshana emva, ndadibana nomfana ogama linguSeamus kwiHolo leVFW e-East Moline, ...
Wayeyinkwenkwe ekhangelekayo, ezintandathu ezithandathu, ezithandathu ezithathu, i-eyed ecacileyo, ngokumomotheka. Wandixelela ukuba wajoyina iMarines, kwaye wayeya e-Iraq kwiveki elandelayo. Kwaye njengoko ndandiphulaphule ukuchaza isizathu sokuba afune ukubhalisa, ukholo olupheleleyo kwilizwe lethu kunye neenkokheli zalo, ukuzinikela kwakhe emsebenzini kunye nenkonzo, ndacinga ukuba le nsizwa yinto yonke into enokuthi ithemba ngayo kumntwana.
Kodwa ke ndazibuza: Ngaba sikhonza uSeamus kunye nokuba uyasikhonza?
Ndacinga ngamadoda angama-900 kunye nabasetyhini - oonyana kunye neentombi, amadoda kunye nabafazi, abahlobo kunye nabamelwane, abangayi kubuya kwiidolophu zabo.
Ndacinga ngemindeni endiyifumene nayo eyayinzima ukufumana ngaphandle kwengeniso epheleleyo yomthandayo, okanye abathandekayo babo babuyele ngesigxina esingekho okanye iimbandezelekile, kodwa abesenalo inzuzo yexesha elide ngenxa yezempilo.
Xa sithumela abafana bethu nabasetyhini ngendlela yokulimala , sinesibophelelo esinzima ukuba singabikho amanani okanye simthulise inyaniso malunga nokuba bahamba ntoni, banakekele iintsapho zabo ngelixa behamba, bathambekele kumajoni ukubuyela kwabo, kwaye bangalokothi baye empini ngaphandle kwempi eyaneleyo yokuphumelela imfazwe, ukukhuseleka uxolo, kwaye bafumane inhlonipho yehlabathi.
Ngoku ndivumele ukuba kucace. Makhe ndicace. Sineentshaba ngokwenene kwihlabathi. Ezi ntshaba mazifumaneke. Kufuneka zilandelwe - kwaye kufuneka zitshathwe. UJohn Kerry uyazi oku.
Kwaye nje ngokuba uLieutenant Kerry akazange agxininise umngcipheko ngobomi bakhe ukukhusela amadoda ayekhonza naye eVietnam , uMongameli uKerry akayi kukhanyela umzuzu omnye ukusebenzisa amandla ethu omkhosi ukugcina iMelika iphephile kwaye ikhuselekile.
UJohn Kerry ukholelwa eMelika. Yaye uyazi ukuba akwanele ukuba abanye bethu baphumelele.
Kuba kunye nomntu wethu owaziwayo, kunesinye isithako kwi-saga yaseMelika. Inkolelo yokuba sonke sinxulumene nabantu abodwa.
Ukuba kukho umntwana kwicala elingasentla laseChicago ongenakukwazi ukufunda, oko kubalulekile kum, nangona kungengomntwana wam.
Ukuba kukho ummi ophakamileyo apho angakwazi ukuhlawula izidakamizwa, kwaye kufuneka akhethe phakathi kweyeza kunye nerenti, eyenza ubomi bam buhlwempu, nangona kungenjalo ngootatomkhulu.
Ukuba kukho intsapho yase-Arab yaseMelika ejikelezwe ngaphandle kokufumana inqwelo okanye inkqubo efanelekileyo, leyo iyongela amalungelo enkululeko .
Yiloo nto inkolelo eyinqobo, yinto engundoqo, ndingumgcini wam mntakwethu, ndingumgcini-dadewethu okwenza eli lizwe lisebenze. Yilokho okusivumela ukuba siphishekele amaphupha ethu kwaye sihlangane njengomnye waseMerika.
E Pluribus Unum. Kwimininzi, enye.
Ngoku njengokuba sithetha, kukho abo balungiselela ukwahlula, oomatshini abathintekayo, abathengisi ababi abafumana imibutho yezopolitiko nantoni na.
Ewe, ndithi kubo namhlanje ebusuku, akukho i-liberal yaseMelika kunye ne-America ekhuselekileyo-kukho i-United States yaseMelika. Akukho iMelika yaseMelika kunye ne-White America kunye neLatino America kunye ne-Asia yaseMerika-i-United States yaseMelika.
Iipundits, iipundits ezifana nokucoca-ne-dice ilizwe lethu kwi-Red States naseBlue States; I-Red States yamaRiphabhliki, i-Blue States kwi-Democrats. Kodwa ndineendaba kubo, nazo:
Sithandaza uThixo oyoyikekayo kwi-Blue States, kwaye asiyithandi ama-federal agents agxotha kwiilayibrari zethu kwi-Red States.
Siqeqesha i-Little League kwi-Blue States kwaye ewe, sinamhlobo angama-gay kwi-Red States.
Kukho iipatrioti ezichasene nemfazwe e-Iraq kwaye kukho i-patriots exhasa imfazwe e-Iraq.
Thina singabantu abanye, sonke sithembisa ukunyaniseka kwiinkwenkwezi kunye nemivimbo, sonke sivikela uMerika waseMelika. Ekugqibeleni, yintoni okukhethwa ngulo lonyulo. Ngaba sithatha inxaxheba kwiipolitiki zokugxeka okanye ngaba sinxaxheba kwipolitiki yethemba?
UJohn Kerry ubiza ukuba sithembe. UJohn Edwards usinceda sibe nethemba.
Andiyathethi ngethemba elingenangqondo apha - ukungazi ngokungafuniyo okucinga ukuba ukungabikho kwemisebenzi kuya kuhamba xa singacingi nje ngalo, okanye inkxalabo yokunakekelwa kwempilo iya kuzixazulula ngokwayo xa singayithobeli. Akunjalo oko ndikuthethayo. Ndiyathetha ngento eninzi.
Liyithemba lamakhoboka ehleli ejikeleziweyo zomculo zokucula iingoma. Ithemba labaphambukeli abasemaphandleni asekude.
Ithemba lenkwenkwezi encinci ye-lieutenant ngesibindi ejikeleza iMekong Delta.
Ithemba lomntwana wenkwenkwezi ozama ukuchasana neengxaki.
Ithemba lebhokhwe ekhukhulayo enegama elihle elikholelwa ukuba iMelika inendawo yakhe, nayo.
Ithemba ekujongeni nobunzima. Ithemba ekujonganeni nokungaqiniseki. Uphicotho lwethemba!
Ekugqibeleni, sisisipho esona sikhulu kunazo zonke kuThixo, sisihlwele sesi sizwe. Inkolelo kwizinto ezingabonakaliyo. Inkolelo yokuba kukho iintsuku ezingcono.
Ndiyakholelwa ukuba sinokuphucula umgangatho wethu ophakathi kunye nokubonelela ngeentsapho zokusebenza kwiindlela zithuba.
Ndiyakholwa ukuba sinokunikela ngemisebenzi kwabangenamsebenzi, amakhaya kubantu abangenamakhaya, nokubuyisela abantu abaselula kwimimandla yaseMerika kwindlobongela nokuphelelwa yithemba.
Ndiyakholwa ukuba sinomoya olungileyo kumqolo wethu kwaye ukuba njengoko simele kwimida yembali, sinokwenza ukhetho olufanelekileyo, kwaye sinokuhlangabezana nemingeni ejongene nathi.
Melika! Okwangoku, ukuba uvakalelwa amandla afanayo endikwenzayo, ukuba uvakalelwa ngokukhawuleza ukuba ndiyenze, ukuba uziva unomdla ofanayo ndenzayo, ukuba uziva unethemba elifanayo ukuba ndiyenzayo-ukuba senza oko simele sikwenze, Andiqinisekanga ukuba lonke ilizwe, ukusuka eFlorida ukuya eOregon, ukusuka eWashington ukuya eMaine, abantu baya kuvuka ngoNovemba, kwaye uJohn Kerry uya kufungelwa njengomongameli, kwaye uJohn Edwards uya kufungelwa njengongameli we-vice-president. eli lizwe liza kuphinda liphinde liphinde liphinde liphinde liphinde liphinde liphinde liphinde liphinde libe lusuku lobumnyama kwezopolitiko.
Ndiyabonga kakhulu wonke umntu. Inkosi ikusikelele. Enkosi.
Ndiyabulela, kwaye uThixo uyasikelela iMerika .
Iprofayile kaMongameli uBarack Obama
Iphrofayili kaChris Matthews we-MSNBC ye-Hardball
I-7 Inkoliso yeNkundla ephakamileyo yeLiberal inkundla e-American History
Iphrofayili kaRachel Maddow, uMnumzana we-MSNBC noMlobi weLiberal
Ngaba uHillary Clinton unelungelo loMongameli?
Iingxelo ezi-5 zokuba u-Obama ubona njani ukhetho lukaMongameli we-2008 wase-US
Iphrofayili kaChristiane Amanpour, ABC "Eli veki" uModareli
Izopolitiko zikaGeorge Clooney, uMgqirha kunye noMenzi weLiberal
I-Obama Health Care Reform Intetho kwiCongress (Ithekthi epheleleyo)
Imbali ka-Elizabeth Vargas, ABC News Journalist
ULL - isiFrentshi esichazwa ngeLibini L
I-Synopsis yaseTchaikovsky "yaseLake Lake" eBallet
Iimpawu ezi-10 eziphambili ze-Pop ze-70s
Ukuphindukuzalwa nokuPhila kwaBomi
Inkcazo yeCapping in Linguistics
Okwangoku kubhaliweyo (izenzi)
Esi Sithombe singathatha Intombazana encinane
Marijuana kunye neNkundla ePhakamileyo
A ukuya kuZ Chemistry Dictionary
Imbali emfutshane yeBotswana
Imithetho yeMilingo yaseMerika
Imiyalelo eyi-10 yokuPhathwa kweMoto
Ingaba I-Idea Yami ifanelekile kwi-Patent?
Imihla yokuzalwa yamaBhunga
Ukuqhagamshelanisa amaNicknames namaGama anikezelweyo